Zeorzia: Mpanao gazety ela nihetezana voaheloka higadra 3,5 taona · Global Voices teny Malagasy
Voaheloka tamin'ny fiampangana kolikoly ilay mpanao gazety
Voadika ny 27 Mey 2022 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Ελληνικά, Español, English
Sary avy amin'i Tingey Injury Law Firm tao amin'ny Unsplash. Azo ampiasaina malalaka amin'ny alàlan'ny lisansa Unsplash.
Navoaka voalohany tao amin'ny OC Media ity lahatsoratra ity. Navoaka eto indray ny lahatsoratra nasiam-panitsiana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nomelohin'ny Fitsaràna ao Tbilisi higadra telo taona sy tapany an-tranomaizina i Nika Gvaramia ilay mpanao gazety sady talen'ny Mtavari Arkhi, fantsom-pahitalavitra miandany amin'ny mpanohitra, tamin'ny 16 Mey, noho ny fiampangana kolikoly. Meloka tamin’ny fanararaotam-pahefana i Gvaramia, 45 taona, nandritra ny fandalovany tao amin'ny fahitalavitra iray hafa, Rustavi 2, tamin'ny taona 2019. Niampangana ilay mpanao gazety tamin’ny fanodinkodinam-bola ihany koa ny fitsarana, nandidy azy handoa lamandy GEL 50,000 (16,300 USD).
Araka ny Radio Liberty, nampandoa lamandy an'i Kakhaber Damenia izay niara-voampanga taminy, tale ara-bola teo aloha tao amin'ny Rustavi 2, ihany koa ny fitsarana noho ny fanodinkodinam-bola. Afaka madiodio tamin'ny fiampangana rehetra i Zurab Lashvili, ilay voampanga hafa sady talen'ny masoivohom-baovao Inter Media Plus.
Voalaza fa niantsoantso hoe “Ao tsara!” i Gvaramia tao anatin’ny efitrano fitsarana rehefa avy nandre ny didim-pitsarana. Nanoratra tao amin'ny pejy Facebook-ny koa ilay mpanao gazety hoe: “Tohano hatrany i Mtavari ary andao hanatratra ny fahafahana miaraka aminay! Hilamina ny zava-drehetra”, fotoana fohy talohan’ny nitondrana azy hivoaka ny efitrano fitsarana.
Mifototra amin'ny Porsche Macan S mitentina GEL 76,700 (79,900 USD) izay nomena ny Rustavi 2 tamin'ny fiandohan'ny taona 2019 ho takalon'ny dokambarotra tao amin'ny fantsona ny fiampangana. Nohamafisin’ny mpampanoa lalàna fa nalaina ho ampiasain’ny fianakavian’i Gvaramia ilay fiara.
Na dia tsy mpikambana tao amin'ny Antokon’ny fitondrana United National Movement (UNM) teo aloha aza i Gvaramia dia nitana toerana ambony maromaro nandritra ny fitondran'ny antoko ary mbola iray amin'ireo mpanohana mafana fo ny antoko. Nisolo tena ny filoha teo aloha Mikheil Saakashvili tao amin'ny fitsarana ihany koa izy. Mpisolovava niofana teny am-perinasa i Gvaramia.
Tamin'ny Alahady, nampahatsiahy ny Fitsarana ny Mpampanoa Lalàna Zeorziana momba ny tatitra amicus curiae nataon'izy ireo teo aloha izay tsy nahitan'izy ireo antony hanenjehana an'i Gvaramia amin'ny heloka bevava ara-pitsarana na tao amin’ny orinasa.
Namoaka fanambarana manameloka ny didim-pitsarana ho misy ambadika politika ny Transparency International Georgia. Nilaza ilay vondrona fa fanohizana ny fampielezana “fanenjehana ara-politika” atao amin'ireo mpitsikera ny governemanta ny fanenjehana an'i Gvaramia ary “nandefa hafatra mazava ho an'ireo fampitam-baovao hafa mpitsikera”:
Nampiseho ny raharahan-keloka bevava vao haingana natao tamin'ireo mpanorina na ny fianakavian'ny fampahalalam-baovao mitsikera, ny tsy fahombiazana tamin’ny fanenjehana ireo nanomana herisetra tamin'ny 5 Jolay 2021, ny fitomboan'ny trangan'ny valifaty ara-batana atao amin'ny mpanao gazety, ary ny fanadihadiana tsy mahomby hafa fa nanjary mampidi-doza ny asan’ny fampitam-baovao mpitsikera.
Nanaraka ny didim-pitsarana 2019 nataon'ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon'Olombelona nanamafy ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony ao Zeorzia hamindra ny fananan'ny Rustavi 2 ho an'ny tompony teo aloha, Kibar Khalvashi, izay tompon'andraikitra heverina ho olona akaiky ny fitondrana ilay fiampangana. Taorian'ny didim-pitsarana izay niteraka resabe, nanangana fantsona vaovao, Mtavari, hatramin'ny voalohany indray i Gvaramia sy ny ekipany.